Isikhokelo sakho esikhawulezayo ekuCwangciseni i-Getaway eGeorgia Ngexesha loBhubhane
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Isikhokelo sakho esikhawulezayo ekuCwangciseni i-Getaway eGeorgia Ngexesha loBhubhane
Yintoni oyiphosa kakhulu malunga nehlabathi laphambi kobhubhane? Buza lo mbuzo kuye nawuphina umntu othanda uhambo kwaye baya kuhamba rant malunga nokuba baphoswa kangakanani kukuhlola izixeko ezitsha, iicuisine kunye neenkcubeko. Ngelixa ubhubhane we-COVID-19 uchaphazele imiba eyahlukeneyo yobomi bethu, ifuthe layo kwizicwangciso zokuhamba lilikhulu kakhulu ukuba lingakhathalelwa.
IGeorgia, enolwakhiwo olunamandla, imihlaba ye-surreal, kunye nembali eyahlukeneyo, ibonelela ngobuncwane bokusinda kwabantu abondlekileyo kukuhlala ekhaya. Ilizwe elisezantsi-mpuma libonisa umxube we-eclectic weendawo ezintle, iidolophu ezintle, kunye nezixeko zasezidolophini. Inento egcinelwe umhambi ngamnye.
Kodwa ukuba ucwangcisa uhambo oluya eGeorgia ngexesha lobhubhane, uya kujongana nenqwaba yemibuzo kunye neenguqulelo.
Ngaba kukhuselekile ukuya eGeorgia ngoku? Ngaba ndingandwendwela iGeorgia nokuba andigonywanga ngokupheleleyo? Ngaba kufuneka ndinxibe iimaski kwiindawo zikawonke-wonke? Ngaba kufuneka ndiphathe ingxelo yovavanyo ye-RT-PCR engeyiyo ukungena kurhulumente?
Ngumboniso nje wemibuzo eya kuyikhukulisa ingqondo yakho ngalo mzuzu ucinga ngokuya eGeorgia. Kule bhlog, silukhuphile lonke ulwazi oludingayo ukonwabela iholide ekhuselekileyo neyonwabileyo eGeorgia. Makhe sijonge.
Ithini imeko yangoku ye-COVID-19 eGeorgia?
Inani losulelo oluqinisekisiweyo lwe-COVID-19 eGeorgia lukhuphukile ukusukela nge-5 kaJulayi ka-2021, xa urhulumente wabona umndilili ophantsi enyakeni. Urhulumente uxele umyinge wamatyala amatsha angama-7,400 yonke imihla kwiveki ephelileyo. Kukutsiba okungama-25x ngokuthelekiswa namanani asuka kwiiveki ezisixhenxe ezidlulileyo.
Phantse izigulana ezingama-5,000 19 ze-COVID-XNUMX zifumana unyango kwizibhedlele ezahlukeneyo zase-Georgia. Amaziko okhathalelo lwempilo kurhulumente ebesebenza e I-90% yamandla e-ICU.
Ngaba oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uphephe ukuya eGeorgia ngokupheleleyo?
Ewe, akukho ndlela ilula yokuphendula lo mbuzo. Ingcinga elungileyo ukunqanda naluphi na uhlobo lokuhamba olungabalulekanga ngexesha lobhubhane. Kodwa zikhona iindlela zokuqinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nokuba sempilweni, nokuba ukhetha ukuya eGeorgia ngoku.
Kuthekani Ngemiqathango Yohambo eGeorgia?
Ngokubhalwa kwale, iGeorgia ivulelekile kubahambi abavela ngaphakathi e-US Urhulumente ukwamkela nabakhenkethi bamanye amazwe, kuthintela amazwe ambalwa, afana ne-India, i-Iran, uMzantsi Afrika kunye ne China. Kananjalo, akukho mfuneko inyanzelekileyo ukuba abahambi bayokuvalelwa bodwa emva kokufika kwabo eGeorgia.
Abahambi bamanye amazwe kusafuneka banike ingxelo engeyiyo ye-RT-PCR (engekho ngaphezulu kweeyure ezingama-72) ekufikeni kwabo. Akukho mgaqo ulolu hlobo kubahambi basekhaya.
Uninzi lwezokhenketho, iivenkile zokutyela, ii-pubs, kunye nolunye ushishino olungabalulekanga luvulekile. Kodwa basebenza kumandla ancitshisiweyo, kwaye banokuthi bathumele amanyathelo okhuseleko e-COVID-19. Kwangokunjalo, uthutho lukawonkewonke lusebenza kumda olulinganiselweyo kwiidolophu ezininzi.
Ucwangcisa njani uhambo lwakho oluya eGeorgia?
Ukuqala, kufuneka ukhumbule ukuba izithintelo zokuhamba ezinxulumene nobhubhane zihlala ziguquka. Qiniseka ukuba ujonga izikhokelo zamva nje kumthombo onokuthenjwa, njenge Iwebhusayithi yeCDC. Kwakhona jonga iindaba zalapha ekhaya ukuze ujonge imeko yosulelo lwe-COVID-19.
Nazi iingcebiso ezimbalwa ezongezelelekileyo zokukunceda wenze olona hambo luhle ukuya eGeorgia:
Tyelela iindawo ekuyiwa kuzo eNcinci
Awudingi mntu ukuba akuxelele ukuba eyona ndlela yokugcina i-coronavirus yenoveli kukuhlala kude kwiindawo ezixineneyo. Uninzi lwabakhenkethi abatyelele iGeorgia luza kuya kwizixeko ezidumileyo, ezinjengeAthene neAtlanta.
Kodwa iGeorgia inokuninzi kakhulu esinokukunika. Ukuba ujonge iindawo ezolileyo nezizimeleyo zabakhenkethi eGeorgia, cinga ngokundwendwela iidolophu ezingaphumeleliyo, ezinje ngeSnellville kunye neDahlonega. Ezi ndawo zikunika umbono wento ebaluleke kakhulu yaseGeorgia ngelixa ikuvumela ukonwabela iholide yakho ngesantya esihle.
Unokucwangcisa uhambo oluya kwidolophu entle yaseSavannah okanye kwimifanekiso egqibeleleyo yeGolden Isles. Ungalibali ukujonga izithintelo zokuhamba ngaphambi kokuyila uhambo lwakho.
IGeorgia iyayithanda imozulu efudumeleyo kunye nehlobo elide, elifudumeleyo kunye nobusika obubandayo. Urhulumente uthambekele kwimvula rhoqo nakwiindudumo. Kwakhona imozulu ithanda ukwahluka ngokuxhomekeke kubume bendawo.
Kungenxa yoko le nto kusoloko kungumbono olungileyo ukujonga iifayile ze- yemozulu eSnellville, Dahlonega, Savannah, kunye nezinye iindawo onqwenela ukutyelela kuzo eGeorgia. Iya kuqinisekisa ukuba uyonwabela iholide ezele ulonwabo kunye noxinzelelo ngaphandle koxinzelelo.
Qaphela ngokuKhuseleko kwakho
Ngelixa uninzi lwamaziko eGeorgia angasenayo imigaqo-nkqubo yokufihla ubuso, qiniseka ukuba unxiba imaski nanini na undwendwela umtsalane kubakhenkethi. Ungalibali ukulandela ucoceko lwesandla kunye neeprotokholi zokuhambisa kude ekuhlaleni. Ukuba uyokutya, qiniseka ukuba ubuza indawo yokutyela malunga nemilinganiselo yokhuseleko abayisebenzisayo ngoku.
Nokuba ujonge i-escapade yeveki okanye okokubaleka ngeempelaveki ngokukhawuleza, iGeorgia inento yokubonelela wonke umntu. Phanda ngezithintelo zokuhamba zakutshanje ngaphambi kokucwangcisa uhambo lwakho. Jonga uqikelelo lwemozulu kwangaphambili ukuthintela naziphi na iingxaki ezingeyomfuneko ngexesha lohambo lwakho. Kwakhona, khetha iindawo ezingaziwayo kangako ukunqanda abakhenkethi abazithandayo, kwaye wonwabele iholide ekhuselekileyo nenoxolo.